Alex Riley momba ny fihetsika nataon'ny Miz momba ny olana miaraka amin'i John Cena - Wwe
Alex Superstar WWE teo aloha Alex Riley, fantatra ankehitriny amin'ny anarana hoe Kevin Kiley Jr., dia nanokatra ny momba ny hen'omby niaraka tamin'i John Cena, ary ny mety ho fihetsiky The Miz momba an'io.
Tsy takona afenina fa nifamaly tany ambadiky ny sehatra i Alex Riley sy John Cena raha ny superstars roa tonta no voalohany tamin'ny WWE TV. Riley dia efa niresaka momba ny fomba fihinan'omby miaraka amin'i John Cena fiantraikany ny asany WWE amin'ny fomba ratsy.
Hoy i Riley: 'Heveriko fa tamin'ny farany, nisy lehilahy roa tsy nifankatia. Na dia mampalahelo aza izany, nisy fiatraikany teo amin'ny asako io satria izy no izy. '
Raha niresaka tamin'i Sportskeeda's Chris Featherstone, Alex Riley dia niresaka momba ny mety ho fihetsika The Miz manoloana ny olany tena i John Cena:
'Ka, tsy fantatro izay nolazain'i [Miz] na tsia. Raha te hampahafantatra ahy ianareo ... ka tsy tena tiako, ataoko ny zavatra ataoko, ary tsy tena Google ny anarako. Tsy manelingelina an'io aho, fantatrao ny tiako holazaina? Plus izaho Kevin Kiley Jr izao, ka tena tsy maninona. Fa tsy fantatro izay nolazainy. Raha te hiteny amiko ianareo, afaka manome hevitra aho na afaka mandeha foana. ' hoy Riley.
Riley no mpiara-dia tamin'i The Miz nandritra ny fotoana fohy tokony ho folo taona lasa izay. Ny duo dia nanao asa lehibe satria ny ombelahin-tongony fa i Riley dia nanana ny mety ho tampon-tampon-jaza teo amin'ny lisitra lehibe ary hita izany fa nahazo fihobiana mafy avy tamin'ny mpanatrika nandritra ny fisarahana tamin'i The Miz.
Alex Riley sy The Miz dia nitolona amina andiana lalao taorian'ny fisarahan'izy ireo, ka nandrombaka fandresena roa tamin'ny The A-lister ilay teo aloha. Tamin'ny fizarana RAW tamin'ny 18 Jolay 2011, nandresy an'i Riley tamin'ny fihodinana voalohany tamin'ny fifaninanana amboara WWE ny The Miz, noho izany dia namarana ny fifanolanan'izy ireo.
Vao haingana i Alex Riley no nikendry an'i John Cena tao amin'ny Instagram
Lahatsoratra zarain'i KEVIN (@kileyjrwwe)
Vao tsy ela akory izay i Riley dia niantso an'i John Cena tamin'ny fotoana maro tao amin'ny paositra ofisialiny Instagram ary nanohitra ny Tompondaka Eran-tany 16 nandritra ny lalao Sports Entertainment Union voalohany. Tsy namaly ny fanamby i Cena ary niverina tao amin'ny fahitalavitra WWE izy taty aoriana mba hifandona amin'ny Universal Champion Roman Reigns.
jeff hardy mandresy amboara tompondaka
trey smith will smith son
maninona dean ambrose miala wwe
Fotoana firy no tokony homeko azy hamantarana ny zava-drehetra
wwe fividianana mora vidy
ny fomba famoronana fiainana tsaratsara kokoa